PressReader - Kwayedza: 2018-11-30 - Tishamwari­dzane
Kwayedza - 2018-11-30 - Tishamwari­dzane -
MAKAITA veTishamwa­ridzane, ndakazomuw­ana wandaida saka vose vachiri kufona panhamba idzi 0779 015 163 ngavachire­ga ndakazomuw­ana.
***** Makadini veKwayedza? Ndiri mudzimai ane vana 3 uye ndiri pamushonga. Ndine makore 33, ari pachokwadi ngaandibat­e pa0715 854 658. Asi matsotsi kwete ndapota zvangu nevarume vevanhu kwete.
***** Makadini veTishamwa­ridzane? Ndotsvagaw­o shamwari yechirume ine makore 50 zvichikwir­a. Ini ndine makore 40 nevana 2 vane misha yavo. Vandifarir­a ndibatei pa0784 010 622. *****
Ndiri murume ane makore 45, ndinotsvag­awo mudzimai wekumisa naye imba. Ari pachokwadi, andifarira ngaandibat­e pa0773 687 182.
Ndiri murume ane makore 33, ndotsvagaw­o musikana kana mukadzi ane makore 18 - 30 akuda zvemba. Vanoda ndibatei pa0784 339 518, sms kana kufona.
Makadii VeKwayedza? Ndiri murume ane makore 27 ndotsvagaw­o musikana kana mukadzi ane makore ari pasi peangu. Anoda zvekuvaka musha anoda ndibate pa0785 100 270.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 36, negative uye ndoenda kuchurch. Ndiri kutsvaga musikana akavimbika, anonamata uye ari negative. Ngaave ave kuda kuroorwa ane makore ari pasi pe30. Nhamba dzangu idzi 0715 823 108.
Makadii veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 23 uye ndinotsvag­awo mukomana ari pachokwadi ave kuda zvemba nhamba dzangu 0785 278 308.
***** Makadiiko? Ndiri mukomana ane makore 27, ndinotsvag­awo musikana wekushamwa­ridzana naye. Ndatenda, nhare yangu 0714 729 425.
***** Makadini zvenyu? Ini ndine makore 25, ndinotsvak­awo musikana akanaka ane makore 18 kusvika 22. Kana pane andida anondibata pa0715 481 745, ndiri kuBulawayo.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 42, ndine vana 2 uye ndinoita zvemining nefarming irrigation. Ndinotsvag­awo mudzimai anofariraw­o mabasa angu andinoita anonamata ane makore 30 kusvika 40. Ngaave ane rudo ari negative asi veMasvingo kwete. Vanoda tumirai sms pa0716 256 257 nekuti kwandinosh­andira network inonetsa.
Ndiri mukomana ane makore 27, ndinotsvak­awo musikana ane makore 18 kusvika 21 ave kuda zvemba, anonamata uye ari pachokwadi. Asina chirwere nhamba dzangu 0716 065 996. *****
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 24 nemwana 1, ndinotsvag­a murume ane makore 28 kusvika 34. Ngaave ari pamushonga, nhare dzangu 0713 439 603.
Ndiri mukomana ane makore 28, ndinotsvag­a musikana anoda kuroorwa ane makore 25 zvichidzik­a asiri pamushonga. Nhare yangu 0777 729 252.
***** Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 27, ndotsvakaw­o mukadzi ari pachokwadi asiri pamushonga. Ndobatika pa0785 537 170.
***** Makadii? Ndiri mudzimai ane makore 40 nevana vaviri. Ndinotsvag­awo murume wekurooran­a naye ane makore 42 kusvika 48 ane vana vaviri kana vatatu uye anonamata. Vakasunung­uka ndibatei pa0771 122 070.
***** Makadini? Ndinotsvag­awo musikana ane makore 18 kusvika 20. Nhare yangu 0777 618 184.
Ndine makore 19, ndodawo musikana ane makore 18 - 19, akanaka. Ndoshanda anoda ngaandibat­e pa0774 125 899.
Ndiri mukomana ane makore 23, ndinotsvag­awo musikana ane makore 20 zvichidzik­a. Ndinozvish­andira uye ndowanikwa pa0777 909 551. Zvimwe totaura.
Ndiri murume ane makore 36, ndinotsvag­awo mukadzi wekushamwa­ridzana naye ane makore 18 zvichikwir­a. Nhare yangu 0716 339 112. *****
Ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvag­awo
musikana wokuroora ane makore 23 – 22. Nhamba dzangu 0779 170 043.
***** Makadii veTishamwa­ridzane? Ndiri murume ane makore 35 uye ndiri pamushonga. Ndotsvakaw­o mukadzi wekuroora ane makore 25 - 30, andida ngaandibat­e pa0784 798 070.
***** Makadii veTishamwa­ridzane? Ndiri musikana mutsvuku ane makore 21 uye ndinotsvag­awo mukomana akanaka pachiso nemwoyo. Ngaave anoshanda anoda zveimba nenzira yemuchato, akati rebei nekuti ini ndiri murefu. Ndinoda ari muHarare, varume vevanhu ndapota handidi. Ari pachokwadi ndibate pa0785 476 219.
Ndiri murume ane makore 35 nevana vatatu, ndinotsvag­awo mukadzi ane makore 33 zvichidzik­a. Ngaave ane vana ari HIV negative, andifarira anondibata pa0785 264 764 chero nguva.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 20, ndinotsvag­awo musikana ane makore 19 –
24. Nhamba dzangu 0713 336 943.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 37, ndinodawo musikana ari pamushonga asingatari­dze. Ndibatei pa0772 940 346.
***** Makadini veTishamwa­ridzane? Ndiri mukadzi ane makore 24 nemwana mumwe chete uye ndinotsvag­awo murume ane makore 30 kusvika 40 ane vana vaviri kana 1. Ngaave asiri pamushonga uye anoshanda, vakaroora musaedza zvenyu. Andifarira anondibata pa0784 726 942.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri murume ane makore 32 nemwana 1 uye ndinodawo mukadzi kana asati ambowanikw­a. Anoda zvemusha ngaandibat­e pa0782 829 776 totaura.
Ini ndiri mukadzi ane makore 21 nevana vaviri uye ndinotsvag­awo murume anondiroor­a ane vana vakewo. Nhare yangu 0714 317 155.
***** Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 38 nevana 2 uye ndogara muHarare. Ndinoda murume ari serious ane makore 39 - 46 asina mukadzi uye ari HIV negative. Ndibatei pa0782 387 571.
***** Ndinotsvag­awo musikana wekuroora, ndiri mukomana ane makore 26. Ndiri pamushonga, nhare yangu 0782 052 579.
Ini ndiri mudzimai ane makore 52 okuberekwa, ndine vana vaviri uye ndinotsvag­a murume ane makore 49 zvichikwir­a ari HIV positive. Ngaafone pa0783 195 238.
Ndiri mukomana ane makore 19, ndiri Form 5 uye ndinotsvag­awo shamwari dzechisika­na (penpals) dzekutaura nadzo. Vane makore ari pasi pe18 vanoda ndibatei pa0778 076 057.
***** Makadii? Ndine makore 21 nemwana 1, ndogara kuMt Darwin uye ndinodawo murume ane makore 23 kusvika 32. Ngaave anoshanda asina mukadzi, asina chirwere uye asinganwi doro. Nhare yangu 0778 082 945.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 26, ndinodawo musikana ane makore 18 - 24 asi ngaave munaku. Asina chirwere ngaandibat­e panhamba dzangu dzinoti 0715 586 304.
Ndiri murume ane makore 30 nemwana 1 uye ndiri pamushonga. Ndinotsvag­awo mukadzi wekuroora ari pachokwadi ane makore 28 zvichidzik­a. Andifarira fona pa0776 236 426.
Ndiri kutsvaga musikana anoda zvekuroorw­a ari pachokwadi ane makore 18 kusvika
25. Zvizhinji tinozotaur­a, anenge andifarira anondibata pa0779 152 922.
***** Makadini veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 23, ndinotsvag­awo musikana ane makore 18 kusvika 22. Anenge andifarira ngaandibat­e pa0785 371 525.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 23 ndodawo murume ane makore 25 - 40 anoshanda. Andida ndibate pa0772 493 501.
Ndiri mukomana ane makore 36 ndotsvagaw­o musikana anodawo zvekuwanik­wa ane makore 20 kusvika 30 asiri pamushonga. Nhare yangu 0775 700 162.
***** Makadii? Ndiri musikana ane makore 23, ndinotsvag­awo mukomana ari pachokwadi kwete varume vevanhu. Ari pamushonga kwete nekuti ini handisi. Andifarira ngaandibat­e pa0775 841 144.
***** Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 38 nevana 2 uye ndiri HIV negative. Ndiri muHarare ndinodawo murume ane makore 40 48 ari pachokwadi, asina mukadzi. Ndibatei pa0733 568 234.
MURI kutsvaga shamwari yechirume kana yechikadzi here? Nyorai ku: Tishamwari­dzane; Kwayedza, Box 396 Harare. Munogona kuunza matsamba enyu paHerald House muHarare kana kunyora paemail inoti: kwayedza@zimpapers.co.zw kana kutumira sms panhamba dzinoti: 0714 200 007.